Kannisa guddicha addunyaa kanaa: Kun kanniisa moo awwaanisa? - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Clay Bolt
Kannisni guddicha addunyaa kanaa isheen dhaltuu taate argamte
Kannisni akka addunyaatti guddaa ta'e saayintistoota jalaa waggoota kudhan dura badee ture irra deebiin argame.
Kannisni guddinaan addunyaatti gita hin qabne kun waggoota kudhan oliif waan badeef hin jiru jedhame yaadama ture.
Kannisni guddaan amma quba Abbudduu dargaggeessaa tokkoogahu kun Odola Indoneeziyaatti baayyee hin qo'atamnerratti argame.
Gosti Kannisa kana maqaa 'Wallace ' jedhamuun kan waamu yoo ta'u,maqaa kana kan argate maqaa ogeessaa Saayinsii Ramaddii fi Abuurraa Lammii Biritaniyaa Alfireed Ruseel Waalas booda. Namticha kanatun bara 1958 waa'ee kannisa kanaa ime.
Tuuti kannisaa imala xiyyaaraa tursiise
Qo'attoonni ALA bara 1981 kannisaa argineerra jedhani ,erga bsara sanatii garuu hin argamne.
Samuuda Kannisa Wallace guddichaa
"Kannisa hanga kanaa guddatu osoo balali'aa jiruu arguun hedduu nama gammachisa. Kannisa kanaan dura sanyiin isaa lafa irraa baduun isaa mirkanaa'e ija keenyaan osoo balali'uu arguun namatti tola," jedha ogeessi suuraa seenaa uumamaa kannisa kana jalqaba suura kaase Clay Bolt.
"Akkam akka bareedaa ta'eefi sanyii guddaa lubbuun jiru arguun, akkasumas sagalee baallee isaa yeroo inni uursaa mataa koo bira darbu dhaga'uun waan ajaa'ibaati. "
Kannisi Wallace guddichi (Megachile pluto)
Baallee inchii lamaafi walakkaattti tilmaamamu qaba waan ta'eef akka addunyaatti kannisa guddichadha.
Kannisi kun dhaltiin ishee mana ishee boolla rirmaa keessatti kan hojjetattu yommuu ta'e muka akka hapheetti walqabatan mangaagaa isheetiin guuruudhaan walirra naqxee ijaarratti. Kun ammoo akka rirmoonni godoo ishee hin weerarre taasisa.
Gosti kannisa kanaa adda durummaan jiraachuudhaaf bosona gammoojjii kan barbaadu yommuu ta'u mana ririmaa holqa mukaa keessatti hojjetatu
Wallace, kan yaad-rimee ivoluushinii Charles Darwin waliin argate yommuu ta'u kannisa kana gur'aacha ta'ee kan awwaanisa fakkaatuufi mangaagaa guddaa qabu jechuun ibse".
Argannoon kun, odola Indoneeshiyaa Moluccas Kaabaa jedhamuun beekamu keessatti yommuu ta'u bosonni naannoo kanaa ammallee akaakuu ilbisoota hedduu qorannoon bira ga'amu hedduu qaba jedhamee abdatama.
Kanniisa waliin mana tokko keessa
Tuuti kannisaa Afrikaa Kibbaatti imala xiyyaaraa tursiistee
Viidiyoo, Baalee Roobee: Maatii kanniisa waliin mana tokko qooddatan, Turtii 1,57